Iko Kunakidzwa kweWakamira Wiricheya - Gara Kumira Zvimiro
Mawiricheya vafambira mberi zvakanyanya kubva kumacheya ari nyore akabatana nemavhiri kusvika kune epamberi magetsi newiricheya emagetsi. Iko kuwanikwa kweakabatanidzwa zvinhu, izvo zvinoita kuti mashandisiro eaya anobatsira michina ive yakanyanyisa kugadzikana ruzivo, iri zvakare imwe bhenefiti.
Mawiricheya vakashanda basa rekupa kufamba uye kuzvimiririra kune vakaremara kusvika pamwero mukuru. Kufamba kwakasarudzika shanduko inodiwa kusvika pakuvharirwa kwepanyama kunokonzerwa ne kuremara. Na kushandisa Mawiricheya izvo zvinobatsira mukusimuka, unogona kuve nekuzvimiririra kwakawanda uye unogona kutora chikamu mune zvakatowanda zviitiko.
Tsigira Sisitimu Paunenge Wakamira
Unogona kuwana akawanda marudzi e vakamira mawiricheya. Izvi zvinopa mushandisi tsigiro inodiwa akamira. Iyo zvinobatsira yekuishandisa iwo akawanda kwazvo kana achienzaniswa neakajairwa. Izvi zvinobatsira mushandisi kushingairira kutora chikamu mune mamwe mabasa, mashandiro, kana zviitiko zvekuzorora zvisingaite nemhando yekutanga yekugara wiricheya.
Kungava kugadzira zvokudya, kana kuti chishuvo chokusimuka pakukwazisa vanhu, kana kuti funga nezvemuenzaniso wokupa hurukuro dzinokosha nokuitawo chimwe chinhu kubasa, kana kuti zvingava zvinobatsira pakusvika zvinhu zviri pamwero uye zvisingambofi zvakasvikwa chigaro chekugara; zvese izvi izvozvi zvinogoneka nekumira kutsva Mawiricheya.
Izvi zvakagadzirirwa kuve zvisingaremi uye kubatsira mushandisi kumira akatwasuka.
Zvitaera zvakajairika zvekugara Mawiricheya gonesa chete tilting it. Kana inogona kunge iine chiitiko chekutsikisa iyo wiricheya kuita shanduko dzekuzorora mamiriro. Rudzi urwu rwekumira wiricheya, zvakapetwa kubatsira kupa rutsigiro kumakumbo nemuviri pasi kana munhu achisimuka.
Muviri wese wemunhu unosundidzirwa pa wiricheya kutsigirwa. Izvi zvinowanzo shandiswa kunyangwe munhu akaneta kana kushaya simba, sezvo zvisingade zvakawanda kugona kwemunhu kutsigira akamira akatwasuka. Inongoda kuyedza kusudurudza nzvimbo kubva pakugara pasi kusvika pakamira.
Bhatiri Rakabatsirwa wiricheya
Izvi hazvina kufanana nemagetsi emagetsi wiricheya. Icho chikamu bhatiri rakagadziriswa wiricheya. Munhu anofanirwa kudzora izvi ne joystick, iyo yakaiswa padhuze nemunwe. Izvi zvine akasiyana mavhezheni ekushandisa kwakaomarara pamwe nekunyanyisa kushandisa kwemukati mabasa.
Kana uchifunga nezvekutenga kumira wiricheya, iwe unofanirwa kubatana nevagadziri kuti uwane yakanaka dhizaini sarudzo yezvaunoda. Kubva pane iyo setting munhu anofanirwa kushanda mukati, yakakodzera mhando yekumira Mawiricheya inogona kutengwa.
Ndapota tipei mamwe mashoko: Manual WiricheyaWiricheya yakamiraProduct InquiryReplacement Parts